Adedelwe ngebheyili amaphoyisa abhekene necala lezidakamizwa nawenkohlakalo | News24
Adedelwe ngebheyili amaphoyisa abhekene necala lezidakamizwa nawenkohlakalo
Mpumalanga – Amaphoyisa amabili, asolwa ngokuba yingxenye yezigebengu ezishushumbisa izidakamizwa ukusuka eSwazini kuya eNingizimu Afrika, anikezwe ibheyili kulandela ukuboshwa kwawo eJeeps Reef, eMpumalanga, kusho oKlebe ngoLwesine.
Abesilisa ababili badedelwe ngebheyili ka-R1 000 umuntu emunye eNkantolo kaMantshi eTonga ngoLwesithathu ngamacala enkohlakalo, ukutholakala nesibhamu esingekho emthethwenmi nezinhlamvu kanye nokushushumbisa izidakamiswa.
UMacdonald Skhumbuzo Masilela, 32, noDuo Sibusiso Silas Shabangu, 41, baboshwe emizini yabo ekuseni ngoLwesithathu, ngokusho kwesitatimende.
OLUNYE UDABA: Ushonile owesifazane ophoseke eweni ekha amakhambi
UMasilela kuthiwa utholakale nesibhamu esingekho emthethweni kanye nezinhlamvu, kanti uShabangu yena kuthiwa utholakale namadokodo asesiteshini samaphoyisa esiseSchoemansdal.
Icala likaShabangu lidlulisele eNkantolo kaMantshi eNelspruit, lapho kulindeleke ukuba avele khona ngoMashi 15.
UMasilela kulindeleke ukuba yena aphinde avele eNkantolo yaseTonga ngoMashi 7.